Insect Sculptures Ny Dokambarotra - Famolavolana
Ny Dokambarotra Ny tsirairay isaky ny namboarina mba hamorona sary sokitra ny bibikely manaitaitra ny tontolo iainana sy ny sakafo hohaniny. Ny zavakanto dia nampiasaina ho fiantsoana amin'ny alàlan'ny tranokala Doom izay mamaritra ny asan'ny tokantrano ihany koa. Ny singa ampiasaina amin'ireo sary sokitra ireo dia nalaina avy tany amin'ny kianja fanariam-pako, fanariam-pako, farafara renirano ary tsena super. Rehefa tafavory ireo bibikely tsirairay dia nalaina sary sy niverina tamin'ny Photoshop.
Anaran'ny tetikasa : Insect Sculptures, Anaran'ny mpamorona : Chris Slabber, Anaran'ny mpanjifa : Chris Slabber.
Ny Dokambarotra Chris Slabber Insect Sculptures